Ady amin’ny covid-19 : nanolotra fanampiana ny OMS sy ny UNFPA | NewsMada
Nanolotra fanampiana hafa indray ho an’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ny OMS sy ny UNFPA tetsy amin’ny CCO Ivato, ny talata teo. Nahitana fanafody sy kojakoja fiarovana ho an’ireo mpiasan’ny fahasalamana ary fitaovana fitsaboana ireo tratran’ny covid-19 efa sempotra tao anatin’izany fanampiana izany.
Natao hamaliana haingana ny filana amin’izao fiparitahan’ny valanaretina izao ireo fanampiana vao tonga ireo, raha ny fanazavana . Natao hanampiana ireo sampan-draharaha tena miasa mafy eny anivon’ny tobim-pahasalamana ihany koa.
Marihina fa mbola handrenesana fitarainana ireo mpiasan’ny fahasalamana amin’ny tsy fahampian’ny fitaovana fiarovantenan’izy ireo. Manahy ny ainy izy ireo ary manahy ny fifindran’ny aretina amin’ny vady aman-janany noho ny fiarovan-tena tsizarizary. Hanampy azy ireo indrindra ireo fitaovana natolotra avy amin’ny mpiara-miombon’antoka ireo.
Nandritra io fanolorana ny fanampiana io ihany koa no nanomezana ny tohana fanampiny avy amin’ny Pnud sy ny Pam ary ny CRM.